Fananganana, fotoana fohy, fanitarana | Martech Zone
Fananganana, fotoana fohy, fanitarana
Zoma, Oktobra 15, 2010 Alahady Oktobra 4, 2015 Douglas Karr
Mpamaky iray nanatrika Blog World Expo nilaza tamiko fa famoizam-po io andro io tsy nisy ananan'ireo mpandahateny iray: Scott Stratten. Namoaka vao haingana i Scott Unmarketing, boky iray izay somary naneso ahy, namaky teny am-pahatongavana tany Las Vegas. Ity no Blog World Expo voalohany nataoko, noho izany tsy azoko lazaina ny hatsarany - ankoatry ny efa nanao fifandraisana tambajotra tsy mampino ary nifampiresaka tsara tamin'i Scott tamin'ny voalohany (sy fanindroany) dia nifanena taminy aho.
Miaina mifanaraka amin'ny bokiny i Scott… amin'ny lahateniny, ny famelabelarany ary ilay boky. Antsoin'i Scott hoe Unbook. Fohy sy mora levona ireo toko. Misy fomba firesaka momba ilay boky. Ary vantany vao mamaky ny fanovozan-kevitra voalohany ianao dia hihomehy… mamaky ny fanovozan-kevitra etsy ambany avy eo. Tsy maintsy vakiana izany.
Na dia tsy nahavita ny boky aza aho dia efa ankasitrahako ny fahaizan'i Scott tsy dia mahavita be loatra ny asa atao ho an'ny mpivarotra - indrindra raha ny amin'ny fampiasana media sosialy. Hitako fa maro amin'ireo mpandaha-teny ambony, mpanoratra ary consultants no mahavita an'izany, mety ho iray amin'ireo tsara indrindra i Scott. Afaka mifantoka lavitra amin'ny tabataba rehetra izy ireo ary mifantoka amin'ny tena olana.
Lohahevitra iray tao amin'ilay boky ny fijerena kely ny fomba fampiharana ny media sosialy… dingana telo tsotra. Hampiako tsirairay ny 2 cents - tsy tenin'i Scott ireo.
mandany - Ny fandraisana zavatra matanjaka toy ny haino aman-jery sosialy dia mety ho sady mampivadi-po no koa miasa mafy. Mety handratra ny fandrefesana ny valiny. Vokatr'izany, orinasa maro no nandao tanteraka ny media sosialy fa tsy nahatsapa tanteraka ny fahafaha-manangana am-bava, fahefana, laza ary orinasa manaraka… na mivantana na amin'ny alàlan'ny referral.
vahana - Raha vantany vao hitanao hoe inona no tena miasa (eto dia misy hevitra tsara hampiasana a consultant amin'ny media sosialy… Ary tazomy amin'ny afo ny tongotr'izy ireo amin'ny valiny), ny dingana manaraka dia mety handany fotoana be indrindra. Tsy haingam-pandeha haino aman-jery sosialy… hazakazaka hazakazaka marathon. Elaela ny ebbs sy ny onjan'ny tambajotra sosialy sy ny tontolon'ny bilaogy dia manamarika anao sy hitomboanao. Fahita eto koa ny fandaozana. Ny tontolon'ny fifaninanana tena avo lenta amin'ny haino aman-jery sosialy dia mety maharitra amam-bolana na herintaona na roa vao handalo votoaty mahafinaritra. Aza very ny tranokalan'ny tanjonao ary mijanona eo amin'ny lala-mahitsy!
fanitarana - io rehefa mahafinaritra. Nandondona domino vitsivitsy tamin'ny paikadinao ianao ary izao dia mila mitady mpanelanelana vaovao, mpihaino vaovao ary hevitra vaovao vao hampiharina. Efa mahazo valiny ianao… faly ny lehibinao… nividy haino aman-jery sosialy ny fikambanana ary mioty ny tombony azonao. Ny kolontsain'ny fikambanananao aza dia miova avy any ivelany satria hitanao fa mahafaly ny mangarahara. Misongadina ny sain'ny mpiasao, mandray anjara ary faly. Ary ny mpankafy sy ny mpanaraka anao dia mitombo haingana izao.
Raiso ny kopian'ny Unmarketing raha vantany vao afaka ianao. Tsy ny boky marketing eo ho eo no feno ny mazava ho azy. Mamporisika ireo orinasa hanao risika (marani-tsaina) i Scott fa tsy hahazo valiny mahatsiravina amin'ny ezaky ny varotra matanjaka sy azo antoka. Atsaharo ny marketing. Atombohy ny fandraisana andraikitra.
Tags: fanangananafampirantiana izao tontolo izao bilaogyfanitaranavahanamilalao soa aman-tsaraazo antokascott strattentsenambarotra
Fampianarana ambony sy ny revolisiona Foursquare
Bravo Zulu: Nanaiky ny haino aman-jery sosialy ny tafika amerikana